Iibso Jawiga Gawaarida Gudaha RGB LED Light Strip - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Gawaarida Gudaha Gudaha RGB LED Light Strip
dib u eegista 66
$ 23.99 qiimaha joogtada ah $ 34.99
Midabka Midabaynta USB Remote Remote Sigaarka Sigaarka APP APP USB
USB Remote / 4pcsx9leds Remote Sigaarka / 4pcsx18leds Remote Sigaarka / 4pcsx12leds Remote Sigaarka / 4pcsx9leds Sigaarka APP / 4pcsx12leds Sigaarka APP / 4pcsx9leds USB Remote / 4pcsx18leds USB Remote / 4pcsx12leds USB APP / 4pcsx18leds USB APP / 4pcsx12leds USB APP / 4pcsx9leds Sigaarka APP / 4pcsx18leds
Gawaarida Gudaha Gudaha RGB LED Light Strip - USB Remote / 4pcsx9leds gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Shayga: Siraajada Hawada
Magaca Qaabka: Nalka gudaha ee gaariga
Ballaca Shayga: 1cm
Nooca Waxyaabaha: 1
Miisaanka Shayga: 0.3kg
Meesha isku imaatinka: Gawaarida Gudaha
Qalabka: ABS + Silica gel + Led
Qaabka Gawaarida: Universal
Heerka biyaha aan dhicin: IP68
Noolaha Nolosha: 50000 saacadood
Nooc dhexdhexaad ah: USB
Midabka Shell: Madow
Xirxirida: 4pcs / set
Midabka iftiinka: casaan, cagaar, buluug, caddaan, oranji, jaalle, cyan, guduud
Iftiinka iftiinka: hagaajin karo
Isticmaalka: Nalalka Cimilada / Siraha Qurxinta / Wareegga LED
Tirada hababka: 8 nooc
Heerkulka Shaqada: -40 ~ + 80 digrii
Nooca Laydhka Led: Daabashada Darajada 180
Xaqiijinta: 2 Years
Shahaadada: ROHS / CE
Nooca LED: 5050 SMD;
Tirada Caagga: 4pcs (36LEDs / 48 LEDs / 72LEDs) Iftiin
Danab: Gal 12V, DC 5V
Shahaadada: CE / FCC
Faahfaahin: Nalka gudaha ee gudaha
Midabada & Hababka:
Oo ay ku jiraan 4 qaababka xakamaynta muusikada iyo iftiinka nalka.
8 qaabab midab: Casaan, Cagaar, Buluug, Caddaan, Jaalle, Jaale, Cyan, Midab
4 Hababka Isbeddelka Tooska ah: 2 xakamaynta habka boodka, 2 xakamaynta habka libdhka.
4 Hababka Sensor Muusigga APP Lagu Xakameynayo & Xiriirinta Xarig La'aanta: Si bilaash ah u soo dejiso barnaamijka adiga oo iskaan lambarka QR. Fiiro gaar ah: 1. shid Bluetooth. 2.ku xirnaanshaha xargaha nalka adigoo adeegsanaya Bluetooth. 3. furo barnaamijka si aad u doorato qaababka aad jeceshahay. Kaa caawinaya inaad abuurto jawi jacayl iyo cajiib ah.
Xakamaynta Midabbada badan & Muusigga: In kabadan 8 midab iyo midabbo kaladuwan oo loogu talagalay xulashada (Blinking, Flashing, Brightness, IWM), waxaad abuuri kartaa midab kuu gaar ah. Nalalka baabuurta gudahoodu waxay la jaan qaadi doonaan muusikada taleefankaaga ama cod kasta oo laga soo qaado makarafoonka markaa nalalka ayaa beddeli doona midabbada iyaga oo raacaya laxanka miyuusigga, taas oo kaa dhigeysa inaad dareento inaad fariisato goobta bandhig muusig.
Qurxinta Gawaarida Wanaagsan: Dareenka hawl xasaasi ah, midabku wuu isbeddelayaa iyadoo loo eegayo laxanka miyuusiga Wax soo saar aad u fiican si aad uxirato gaadhigaaga, kor u qaadista ugu fiican ee kor u qaadida gaarigaaga iyo kordhinta amniga wadista baabuurka maalin iyo habeenba.
Si Fudud Oo Loo Rakibmo: Isku soo wada duub nalalka biriijka ee baabuurka, ka dibna ka xoq dhabarka 3M cajaladda laba-geesoodka ah; si fudud ayaa loogu dhejin karaa farqiga
Ku xir sigaarka gaariga
Jeex cajaladda koolada laba-geesoodka ah oo ku dhaji dusha nadiifka ah iyo qalalan
Ku baar lambarka QR taleefankaaga (iPhone / Android) si aad u soo dejiso APP
Daar furaha nalka iyo Bluetooth marka hore, ka dibna fur APP si aad ugu xirto xargaha nalka Bluetooth, ugu dambeyn DIY midabadaada iyo qaababka taleefankaaga.
Batariga kuma jiro
Foggu waa inuu si toos ah ugu tilmaamaa sanduuqa qaataha oo uu ku dhow yahay qalabka wax qaata.
Fadlan ka saar daboolka batteriga ka hor intaadan isticmaalin qalabka fog
Dareemuhu waa in lagu dhejiyaa ama ku dhow yahay afhayeenka
Fadlan masax nadiifinta dusha sare ee goobta kahor intaadan rakibin Nalalka Gawaarida Gawaarida
Fadlan HA QARSADO Qaadaha Infrared laakiin muuji, si ay uga hesho calaamadda Remote Controller. Fadlan ujeedada ka heleyso Qaadashada infrared-ka markaad isticmaaleyso Remote Controller.
Masaafada fog waa 16.4ft, fadlan si naxariis leh u fiirso.
1 dhigay Iftiin
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 66
wax walba way shaqeeyaan !! :)
Midab aad ufiican, dhalaalka xoogaa dabacsan laakiin waxay u muuqdaan kuwo fiican habeenkii! Waxaan ku iibsaday tusaalihii barnaamijka, xusuusnow midabkii ugu dambeeyay, sida xun ee aad kaliya uga badali karto barnaamijka, oo aan horay u aqiin kahor dalabka.
Fiican laakiin aan lahayn baytariyada Sida sharaxaadda